#OromoProtests : Miftah Juneydi Bushra, the student who was shot during today’s protest at Furda town, Badanno district ( E Hararge) has passed away – Welcome to bilisummaa
#OromoProtests : Miftah Juneydi Bushra, the student who was shot during today’s protest at Furda town, Badanno district ( E Hararge) has passed away
ODUU GADDAA–Barataa Miftah Juneeydi Bushraa, kan har’a magaalaa Furdaa, Aaana Baddannoo ( Hararge Baha) keessatti rasaasaan rukutame, lubbuun dabruun oduun amma dhufti ni himti. Miftah akkuma rukutameen gara hospitaal Girawa geeffamuu reefu gabasuun keenya ni yaadatama. Doktoroonni achitti humna kenaayaa oli jedhanii gara Harar ergan. Osoo geeysuuf kararra jiranii aakirame. Rabbiin jannatatti wareegmtoota keenya isa duraatitti haa dabalu.Maatifi waahillan isaa, akkasumas saba isaa lubbuu qaalii inni dabarsee kenneef waaqni jajjabina haa kennuuf.
Previous #OromoProtests .So far 7 students are arrested from Dire Dawa University
Next #OromoProtests: Picture of Dabala Tafa Robi,former Oromo political prisoner who was killed three days ago in Chancho